Sida loogu daro podcast liiskaaga ciyaaraha ee 'Spotify | Androidsis
Spotify waa barnaamijka qulqulka muusikada ugu caansan, sidoo kale nooca ay bixisay. Muusikada ka sokow, Podcasts waxay helayaan joogitaan badan barnaamijka swedishka. Waxaan ka helnay kuwo badan oo iyaga ka mid ah oo laga heli karo arjiga. Sababtaas awgeed, cusbooneysiinteeda cusub waxay soo bandhigaysaa hawl loogu talagalay in lagu hagaajiyo dhegeysiga boodhadhka.
Laga bilaabo hadda, qaabkan cusub ee Spotify waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ku darno boodhadhka liistada liiska. Labaduba waxay ku jiraan liistadayada u gaarka ah oo leh kaliya podcasts, iyo sidoo kale kuwa isku dhafan, oo aan ku leenahay muusig iyo podcasts labadaba. Waxaan hoos ku tuseynaa sida tan loogu sameeyo arjiga ku saabsan Android.
Waxa ugu horeeya ee aan sameyno marka lagu daro inaad horey u haysatid nooca ugu dambeeya ee Spotify, waa in la furo barnaamijka oo laga raadiyo Podcast-yada ku jira. Haddii aad horeyba uga maqashay mid si joogta ah abka, waa inaan marinaa. Kadibna waxaan eegeynaa qeybaha la yiraahdo Podcast, oo lagu muujiyay liiska.
Qeyb kasta agteeda waxaan ka helaynaa astaanta saddexda dhibic ee midigta. Astaantan waa inaan gujinnaa, daaqad cusub ayaa markaa ka soo muuqan doonta, halkaas oo aan ku haysanno fursado dhowr ah Mid ka mid ah xulashooyinka, kan hore, waa in lagu daro liiska.
Markaas waan awoodnaa kudar Podcast-kaas liis gareeye ah in aan horeyba ugu haysannay Spotify. Waxaan sidoo kale abuuri karnaa mid cusub waqtigaas, haddiiba aan rabno inaan ku abuurno liis ay ku qoran yihiin arjiga meesha kaliya ee aan ku leenahay boodhadhyo kala duwan. Tani waxay horeyba u tahay dhadhanka isticmaale kasta.
Sida aad u jeeddo, habka loo raaco Spotify runtii waa mid fudud. Tillaabooyin yar ayaan ku heli karnaa qoraalada aan rabno oo ku jira liiska arjiga, si aan ugu dhagaysan karno iyaga markasta oo aan dooneyno hab annaga noogu raaxeysan Android. Maxaad u malaynaysaa qaabkan cusub ee abka?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sida loogu daro Podcasts-ka liiskaaga Spotify
Sidee looga soo kabanayaa sheekaysiga farriimaha lagu keydiyey Telegram